Gawaarida & Qalabka Qalabka Akhbaarta iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
10-ka Bandhig ee ugu Weyn Gawaarida iyo Qalabka
Gawaarida iyo qalabka la xiriira oo ay ku jiraan qaybaha gawaarida, konteynarada, gawaarida gurmadka, mootooyinka iyo mootooyinka iwm waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah bandhigyada ganacsiga adduunka. Bandhigyada ganacsiga ayaa loo abaabulaa adduunka oo dhan, ujeeddadooda koowaadna waa in lagu soo bandhigo wax soo saarka warshadaha caanka ah iyo kuwa wax iibsanaya. Waxay ujeedadoodu tahay inay helaan fursado ganacsi oo cusub iyo inay caawimaad ka helaan sidii ay magac u yeelan lahaayeen […]Read More
Waxa Loogu Baahan Yahay Shirkadaha Gawaarida Degdega ah
Alaab-qeybiyeyaasha gawaarida degdegga ah waxay ka caawin karaan shirkad lacag uruurinta iyo bixinta adeegyo qiimo leh. Si loo hubiyo in shirkaddu ay helayso heshiiska ugu fiican ee suurtogalka ah, waxaa muhiim ah in la helo alaab-qeybiye ku habboon miisaaniyadda. Badanaa waxaa loo isticmaalaa waqtiyada gargaarka masiibada, gawaarida gurmadka waxaa lagu deeqi karaa shirkadaha, kuwa kale waa la iibsan karaa. Qaar badan […]Read More
Waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado marka aad ka iibsanayso kartoomada Goolafka laga soo iibsado
Gawaarida golf-ka ayaa ah hab fiican oo lagu maro koorsada adigoon isticmaalin gawaaridaada. Alaab-qeybiyaha lagu kalsoon yahay ee gawaarida golf-ka ayaa awood u yeelan doona inuu ku siiyo baabuur la isku halleyn karo iyo waxyaabo dheeri ah oo ka dhigaya iyaga xulashooyinka ugu kharashka badan. Waxaa maanta jira noocyo badan oo gawaarida golf-ka ah. […]Read More
Ilaha Loogu Talagalay Qeybaha Badda iyo Qalabka
Markaad wax ka iibsaneyso alaab-qeybiye ku takhasusay, way adkaan kartaa in la ogaado waxa ay iibinayaan alaab-qeybiyeyaasha qeybaha badda iyo alaabada. Ma awoodi doontid inaad aragto badeecooyinka kala duwan ee la heli karo. Marka, waa muhiim in la ogaado sida ay u eg yihiin iyo waxa loogu talagalay. Haddii aad tahay…Read More
Qaybaha mootada iyo bixiyayaasha mootada mootada
Haddii aad raadineyso qaybaha mootada ugu fiican iyo alaab-qeybiyeyaasha mootooyinka mootooyinka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato halka aad fiirineyso. Markaad bilawdo fiirinta, waxaad arkeysaa inay halkaas joogaan kumanaan mootooyin iyo mootooyin. Laakiin sidee u dooran kartaa cidda aad wax ka iibsanayso? Ma ahan wax qarsoon sida loo helo alaab-qeybiyeyaal […]Read More
Helitaanka Alaabooyinka Qalabka kale ee Gawaarida
Marka ay timaado helitaanka alaab-qeybiyeyaasha qalabka kale ee gawaarida, waa inaad ogaataa in warshadaha qeybaha gawaarida ay yihiin suuq weyn. Waxaa ku jira qayb kasta oo loo isticmaalo in lagu dhiso baabuurtaada. Baahida loo qabo qaybaha baabuurta Baahida loo qabo qaybaha baabuurta ayaa sii kordhaysa sannadihii la soo dhaafay iyada oo shirkaduhu ay ku dadaalayaan inay bixiyaan […]Read More
Waa maxay Siyaabaha Qaar ee Loogu Raadsado Kuwa Dhinac Baabuur La Yeelanaya oo kula shaqeyn doona?
Ganacsiga qaybaha gawaarida waa warshad ku tiirsan shirkado badan oo alaab-qeybiyeyaal ah oo keena kumanaan qaybo gawaarida kala duwan ah. Sababtaas awgeed, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad u baahan tahay inaad sameyso markaad raadineyso alaab-qeybiye wanaagsan. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay si daacadnimo leh daacadnimo u yihiin. Waxaad kaloo u baahan tahay […]Read More
Helitaanka Alaabada Alaabada Iibiya
Xulashooyin badan oo trailer kala duwan Raadinta alaab-qeybiyeyaasha isjiidka ayaa adkaan kara sababtoo ah shirkadaha tirada badan ee iibin kara. Waa inaad aad uga taxaddartaa markaad dooranaysid ganacsade jilayaal ah maxaa yeelay xulashooyin badan oo trailer kala duwan ah Waxaa jira noocyo badan oo isjiidooyin ah oo laga kala doorto oo ay ku jiraan kuwa isjiidka yaryar, dalxiisayaasha, iyo gaadiidka madadaalada. […]Read More
Tareennada Alaab-qeybiyeyaasha - Isha aad ka heli karto Qaybaha iyo Qalabka Tabobarka
Way fududahay inaad hesho shirkad tareen bixiya si ay uga hawl gasho nidaamka tareenka shirkaddaada. Waxaa jira shirkado iyo shaqsiyaad badan oo bixiya alaab tayo leh arimahan. Soosaarka tareenku waa ganacsi warshadeed. Qalabka ceyriinka ah iyo qalabka loo baahan yahay si loo sameeyo tareen ayaa laga iibsan karaa alaab-qeybiyeyaasha tareenka. Waxay kaa caawin doonaan inaad doorato […]Read More
Qaybaha Gawaarida Xamuulka ee Canada
Qalabka gawaarida waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo waxqabadka gaariga iyadoo la kordhinayo howlaha gaari xamuul ah. Qalabka, badanaa loogu talagalay gawaarida xamuulka, waxay ku habboonaan doonaan samaynta iyo nooca gawaarida xamuulka. Waxay ka kooban yihiin waxyaabo kala duwan sida birta, birta birta ah, aluminium iyo polymer. Marka laga hadlayo qalabka, birta ayaa ah tan ugu badan ee amongRead More